Gumiguru 26, 2010 pa 6:14 pm
plugin Izvi zvinoshamisa. Manage nzvimbo ine mitauro zvino ane vana mutambo.
Ndinokutendai nokuti basa rako.
Mbudzi 3, 2010 pa 3:45 pm
Mhoro, kubva otomatiki ndiwedzere kuti 0.65 Ndaiva dambudziko pamapeji angu: yokuGermany mutauro faira de_DE.po airatidzika kuremara. Pane zvakarongwa nyaya pamwe mapfupi marudzi mwedzi shanduro haana shoko. Saka instea pamusoro “Oct” unogona kuona rakazara German Translation “Okt_Oktober_abbreviation”. kana chete Chirungu uye mazita German ndivo chete zvakanzi akaratidzwa nemazvo. saka deactivated 0.65, Dzokera ku 0.61 (ne 0.64 Ndichaita edza gare gare) – uye: zvose zvakashanda nemicheka. Ikozvino ndoona “Oct”…
Mbudzi 4, 2010 pa 10:45 ndiri
Kuongorora izvi, nokuti ikozvino Zvisinei unogona zvichida chokukuvadza gettext kusangana vari plugin itsva, riri nani pane downgrading
Mbudzi 4, 2010 pa 7:49 pm
Ndakapedzera plugin yako nzvimbo zhinji. Zvinobatsira Nzvimbo yangu Indexing zvakanaka Google, zvisinei, kuti Nzvimbo dzose umbomiswa kuburikidza nemitambo Mugoveri nokuti mukuru mutoro Server.
Before, I kuushandisa http://getfreegames.info, asi ikozvino, Ndine ndiribvise. Unogona Ndipei mhinduro (regai kutaura pamusoro upgrading nemitambo)?
Mbudzi 4, 2010 pa 11:52 pm
Handidi kukutaurirai kuti ndiwedzere Hosting wako, kunyange zvichida kuti ipfungwa yakanaka.
Chii chaunogona kuita kuti kushandisa mashomanana dzinobvira:
1. Use APC, ichi kuchaderedza Server mutoro zvinoshamisa
2. Use supercache kana zvakafanana, ichi ine zvakanakira uye dzimwe nekuipira
A zvinoderedza mutoro chokukuvadza mutauro default kushandura, izvo zvichaita kudzivirira transposh kubva kumhanya kwako yepakutanga mutauro mapeji, iyo kazhinji zvinotora vakawanda kwakafanorongwa.
zvimwe mhinduro dziri kutambirwa
Mbudzi 5, 2010 pa 6:19 ndiri
Ndinokutendai nokuti pasina yako mhinduro!
Iwe kureva Ndinofanira uncheck: “Vakwanise default mutauro rokushandura (Bvumira shanduro mutauro default – chinobatsira kuti nzvimbo vanopfuura mumwe mutauro zvikuru)”. ?
Mbudzi 5, 2010 pa 12:04 pm
Mbudzi 6, 2010 pa 6:52 pm
kusunungurwa itsva, achirwara edza zvino